Ogow dhammaan faa'iidooyinka baaskiil wadista | Ragga Stylish
Baaskiil wadista waa nooc isboorti oo lagu dhaqmi karo da 'kasta. Xoogga isboortiga waa in lagu hagaajiyaa da'da iyo awooda jireed ee qof kasta. Waa jimicsi leh faa'iidooyin caafimaad oo kaladuwan oo jidh ahaan iyo maskax ahaanba ah. Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan faa'iidooyinka baaskiil wadista.
Haddii aad rabto inaad ogaato waa maxay faa'iidooyinka baaskiil wadista, kani waa boostadaada.
1 Baaskiil wadid sida isboorti
2 Gargaarka Baaskiil wadista
3 Faa'iidooyinka caafimaad ee baaskiil wadista
4 Waa maxay sababta lagula talin karo in la kaxeeyo baaskiil da 'yar?
Baaskiil wadid sida isboorti
Waxaa jira dad badan oo u haysta sheekooyin khayaali ah baaskiillada tan iyo markii ay yaryihiin. Waqtiga ka dib, wuxuu wax ka beddelaa jidadka, fadhiyada tababarka, baaskiilkiisa u gaarka ah, wuxuuna helaa khibrad iyo xirfado cusub. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee baaskiil wadista heerka nidaamka wadnaha iyo xididdada waa kordhinta caabbinta hawada. Adkaysiga jimicsiga hawada waa midka noo oggolaanaya inaan ku shaqeyno jimicsi heer sare ah safaaradda muddo dheer.
Markii aan baaskiil qaadno waxaan wadnaa wadooyin dhaadheer oo dhex mara dhulka magaalooyinka iyo baadiyaha. Waxay kuxirantahay sida jimicsiga u xoogan yahay, sidoo kale waa inaad maciinsataa iska caabinta jirka. Aynu tusaale soo qaadanno: haddii aan wadno waddo goobeed oo leh gebo gebo ah, waxaan u baahan doonnaa awooddeenna anaerobic. Waxay ku saabsan tahay xooggaas qarxa ee aan ugu baahan doonno afargeena afar-geesoodka ah si aan awood ugu yeelanno inay lugeeyaan oo ay uga adkaadaan iska caabinta noocan oo kale ah.
Waqti kadib waan arki karnaa taas jirkeenu wuxuu la qabsadaa xaalado kala duwan oo aan ku qasbanaanayno. Xaqiiqdii waad arki kartaa haddii aad horay u sameysay waddo 20-kiilomitir ah, hadda waad sameyn kartaa si aad uga fudud oo aan kharash badan ku bixin.
Waxaan falanqeyneynaa faa'iidooyinka kala duwan ee baaskiil wadista.
Waxa ugu horreeya ee ka faa'iideysta baaskiil wadista waa kala-goysyada. In kasta oo cayaarahaan ay jiraan dhaawacyo iyaga u gaar ah, shaki kama qabno taas kala-goysyada ayaan u xanuun badnayn sida ciyaaraha kale sida orodka. Markii aan baaskiil wadno isku-laablaabyadeennu wax saameyn ah kuma yeelanayaan culeyska jirkeenuna wuxuu ku dhacayaa sarkaalka.
Haddii aan si isdaba joog ah u sameyno isboortigaan waxaan kaa caawin karnaa hagaajinta wareegga iyo tababarka wadnaheena. Waana in fuulista baaskiilku ay caawiso yareynta cadaadiska dhiigga iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kordhiso garaaca wadnahaaga ugu badan. Tani waxay ku shaqeyn doontaa wixii aan horay u soo sheegnay ee loo yaqaan adkeysiga aerobic. Haddii aan hagaajino socodka dhiigga waxaan gacan ka geysaneynaa baabiinta kolestaroolka xun iyo kordhinta kolestaroolka wanaagsan.
Dadka baaskiil wadata badanaa si tartiib ah ayey u gaboobaan. Tani waa sababta oo ah jirkeenu wuxuu leeyahay awood ballaaran oo uu ku nuugo antioxidants-ka cuntada ku jira. Waan xakameyn karnaa dareenka daallanimada inta aan horumarinayno waxtarkayaga inta lagu jiro tababarka.
In kasta oo aan si falanqeyn ah loo fuulin baaskiil ayaa kaa caawin kara inaad hesho murqaha. Markii aan bilaabeyno ciyaartan, la qabsiyo kala duwan ayaa laga soo saaraa heerka neerfaha iyo, ka dib, heerka muruqyada. Adoo muruqyada u hoggaansamaya dadaal joogto ah wakhti ka dib oo ka adkaanaya iska caabin, waxaan ku qasbeynaa inay horumariso tiro muruq badan si ay ula qabsadaan kicintan. Waxaad ku bilaabi kartaa ugu yaraan 20 daqiiqo si loo kiciyo muruqyada loona hagaajiyo ku dhaqanka isboortigaan.
Faa'iidooyinka caafimaad ee baaskiil wadista
Faa'iidooyinka kale ee aan ka heli karno heerka caafimaad ee baaskiil wadista waa horumarinta nidaamka difaaca jirka. Nidaamka difaaca wuxuu mas'uul ka yahay inuu iska ilaaliyo dhammaan infekshannada iyo cudurrada. Dhammaan dadka taam ah, gaar ahaan kuwa tababbara iska caabbinta aerobic-ka waxay u muuqdaan kuwo la xanuunsanaya cudurro caadi ah iyo hargab aan badnayn.
Horumarka jirku waa wax aan muran ka taagnayn. Si loo sameeyo jimicsi guba kalooriyeyaasha ku filan, haddii aan ku wehelino cunno sida ku xusan hadafkeenna, waxaan waayi karnaa xaddad badan oo dufan ah muddo gaaban. Sidan oo kale jirkeennu si la yaab leh ayuu u hagaajiyaa. Mid ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee weyn ee aan ka heli karno baaskiil wadista ayaa ah yareynta buufiska. Kaliya hal saac oo baaskiil wadid ah maalintii ayaan iskaga ilaalin karnaa waxkasta oo nagu dhaca shaqada iyo maalinteenaba. Waana ka dib dadaalkii la galay waqtigaas kadib inaan jidhka ku saleyno baaskiilka wuxuu soo saaraa endorfinno taxane ah oo hoos u dhigaya heerarkeena walaaca isla markaana naga dhigaya inaan fiicanahay.
Hadday macaash weyn u sameeyaan dadka 40 jir iyo 60 jir ah. Jimicsiga noocan ah, goor dambe kama daahna bilowga. Waxaa jira daraasado cilmiya oo fara badan oo xaqiijinaya in baaskiil wadista nidaam wanaagsan ee mugga tababarka iyo la qabsiga heerarka iyo da'da qof kasta uu heli karo faa'iidooyin caafimaad oo weyn.
Haddii aad bilowdo baaskiil wadista bislaanshaha waxaad helaysaa guul la hubo. Waana taas kani waa daqiiqadda nolosha ee aad naftaada sida ugu fiican isu taqaan. Sidan oo kale, waxaad si fiican u garanaysaa waxa aad jeceshahay iyo waxa aad rabto iyo waxa adiga kuu fiican. Tani waa sida aan u maareeyno abuurista nooc ka mid ah u hoggaansanaanta qorshaha lagu dejiyey waqtiga. Caafimaadkayagu wuxuu noqonayaa hal dood oo dheeraad ah si aan u awoodno inaan helno habab cusub oo lagu horumariyo. Baaskiil wadiddu waxay leedahay faa'iidooyin badan.
In kasta oo ay run tahay in lagu bilaabo isboorti da'da hore ayaa lagula talinayaa, Haddii aysan ahayn caado, way ka sii adag tahay inaad u soo bandhigto nolol maalmeedkaaga.
Waa maxay sababta lagula talin karo in la kaxeeyo baaskiil da 'yar?
Waa wixii aan kor ku soo xusnay. Xaqiiqdi waad xasuusatay daqiiqado caruurnimo waana meesha aad ugu faraxsanahay. Baaskiilku wuxuu la xiriiray marar badan marxaladda dhallaanka. Waana in fuulista baaskiilku ay faa iidooyin aan la soo koobi karin u leedahay kuwa yaryar oo ay tahay inaynaan ka duudsiyin. Waa mid ka mid ah howlaha badda oo dhameystiran oo aad sameyn karto.
Barida kuwa yaryar si ay u wataan baaskiil iyo waliba barashadooda ayaa ka mid ah waxyaabaha sida weyn loogu xasuusto markii dambe ee qaangaarnimada. Sidaa darteed, haddii aad carruur leedahay, taladu waa taas Baro wadista baaskiil haddii ay tahay waxaaga si aad u hesho dhammaan faa'iidooyinka baaskiil wadista.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxtarka baaskiil wadista.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Gargaarka Baaskiil wadista